Mareykanka oo dhimashada Carona uga sare maray Talyaaniga.
Saturday April 11, 2020 - 20:14:16 in Wararka by Liibaan Jeexoow
ku dhowaad 2000 oo ruux ayaa maanta cudurka Carona ugu geeriyootay wadanka Mareykanka taas oo ka dhigan in Mareykanku uu noqday dalka koowaad ee ugu dhimashada badan caalamka tan iyo markii uu dilaacay Covid19.
Jaamacadda Johns Hopkins ee fadhigeedu yahay magaalada Washington ayaa sheegtay in dhimasahda guud ee dadka Americanka ah ee udhintay Carona ay gaartay 20,506 qof halka ay ladhibanyihiin in kabadan nus malyuun qof.
Mareykanka ayaa kaalinta koowaad galay wuxuuna ka sare maray dalka Talyaaniga oo dadka Carona ugu dhintay ay gaarayaan 19,468 qof.
Dalka Spain ayaa kaalinta sedaxaad kujira waxaana xiga wadamada Faransiiska iyo Ingiriiska marka laga hadlayo dhanka dhimashada iyo bukaannada, guddiga caafimaadka dalka Spain wuxuu xaqiijiyay in maalintii sedaxaad oo xiriir ah uu hoos udhac ku yimid tirada dhimashada maalinlaha ah.
Mas'uuliyiin American ah ayaa saadaaliyay in dhimashada ka dhalan karta Carona ay gudaha Mareykanka gaari doonto 100 kun oo ruux, caabuqa Carona Virus aya faraba ba'an ku haya dowladaha reergalbeedka gaar ahaan Yurub iyo Mareykanka waxaana muuqata in dowladaha Shiinaha iyo dowlado kale oo dhaca Aasiya ay kasoo kabanayaan waxyeellada cudurkan.